Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-Itali eziQhekezayo » I-COVID-19 Itshintsha Iindlela Zokuhamba KwamaTaliyane
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zeMpilo • Iindaba zase-Itali eziQhekezayo • iindaba • Ukuhamba ngololiwe • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Inani labantu abahamba ngezithuthi zikawonke-wonke liqikelele ukuba liyehla laya kwiipesenti ezingama-22.6 emva kwekhefu lasehlotyeni.
Ngaphezulu kwe-50% yabo bacwangcisa ukutshintsha indlela abaziphatha ngayo ekhankanywe yi-COVID-19 bhubhane njengesona sizathu siphambili
Ukusetyenziswa okukhulu kokusebenza kude kunye nokufunda kuphakamisa utshintsho kwimikhwa yokuhamba.
Idatha entsha iza ngaphandle kwenkqubela phambili yomkhankaso wokugonya wasekhaya e-Itali.
Iipesenti ezingama-64.66 zabantu ekujoliswe kubo (okanye abantu abazizigidi ezingama-34.9) e-Itali bagonywe ngokupheleleyo ukusukela ngoLwesithathu.
ElamaTaliyane IZiko leLizwe lezibalo (ISTAT) ukhuphe ingxelo namhlanje, ebonisa ukuba COVID-19 bhubhane iya kuqhubeka nefuthe kwiipateni zokuhamba zabasebenzi base-Itali kunye nabafundi kwiinyanga ezizayo.
"Ukusetyenziswa kakhulu kokusebenza kude nokufunda kuphakamisa utshintsho kwiindlela zokuhamba zabaqeshwa nabafundi," ISTAT ibhale kwingxelo yayo.
"Ngelixa ngaphezulu kwama-80 eepesenti bahamba amatyeli amahlanu ngeveki phambi kwesi sifo, bangaphantsi kwama-70 eepesenti abaceba ukwenjenjalo ngamaza afanayo."
Phakathi kwabasebenzi kunye nabafundi ababandakanyekayo kolu phando, ngaphezulu kweepesenti ezingama-50 zabo bacwangcisa ukutshintsha indlela abaziphethe ngayo bakhankanye imeko yecoronavirus engxamisekileyo njengesona sizathu siphambili.
ISTAT kwaxelwa kwangaphambili ukuba kuya kubakho utshintsho kwezothutho, ngenani labantu abaya kwizithuthi zikawonke-wonke eliqikelele ukuba liyehla laya kwiipesenti ezingama-22.6 emva kwekhefu lasehlotyeni, xa kuthelekiswa neepesenti ezingama-27.3 ngaphambi kwesi sifo.
Ezi datha zeza ngaphandle kwenkqubela phambili yomkhankaso wokugonya wasekhaya wase-Italiya, obone iipesenti ezingama-64.66 zabantu ekujoliswe kubo e-Italiya (okanye abantu abazizigidi ezingama-34.9) ngokupheleleyo kugonyo ukusukela ngoLwesithathu.
Ubhubhane uya kunciphisa ukuhamba kwamaxesha omsebenzi nokufunda, ngokwe-arhente yezibalo.
Olu phononongo lwenziwe njengenxalenye yovavanyo lwe-ISTAT lwangoJulayi lokuzithemba kwabathengi kwisampulu yabemi abangama-2,000 18 abaneminyaka eli-XNUMX nangaphezulu.